Wax Ba Baro 7 Faa’iido Oo ILAAHAY SWT Ku Mannaystay Malabka Iyo Muhiimaddiisa Caafimaad. – Xeernews24
Wax Ba Baro 7 Faa’iido Oo ILAAHAY SWT Ku Mannaystay Malabka Iyo Muhiimaddiisa Caafimaad.
Malabku waxa uu ka mid yahay walxaha cunted ee ILAAHAY SWT ugu deeqay umaddiisa in ay ku manaafacaadsadaan , sidoo kalena laga yaabo in aanad ka warqabin in uu leeyahay faa’iidooyin badan oo dhinaca caafimaadka ah. Malabka marka koowaad laga bilaabo isbadalka maqaarka saameyn weyn ayuu ku leeyahay, caawinta in uu miisaan dhimis kuu sameeyo ,waxyaabaha fiican ee ku saabsan malabka waa in loo isticmaalo daweyn dibiici ah, Alle subxaanahu watacaalaa wuu u kaamil yeelay addoomihiisa wax kasta oo ay u baahan yihiin qur’aanka kariimka iyo axaadiista ayeyna ku cadahay malabka iyo faaidooyinkiisa .
Aniga oo huba in ay farabadan yihiin malabka iyo manfaciisa ayaan jecleystay in aan boggaga caafimaadka aan idinkaga soo tarjumo waxyaabo kooban oo ku saabsan malabka isla markaana la tijaabiyay .
Tamarka Wuu Kordhiyaa: Hadaad dooneyso in aad kordhiso tamarta jidhkaada, isku day in aad malab ku darsato qorshaha raashinka qaar maalin walba , hadii aad tahay kafee cab fadlan yaree waayo wuxuu dilaa waxtarka malabka. Malabka oo la daaimo wuxuu si dabiici ah u saameeyaa in aad hesho tamar. Tusaale hadii aad roodhi marsato malab koobka shaahna aad in yar oo malab ah kaga darsato xitaa aad biyaha ku darsato ogow waa quraac rasmi ah . Dadka sameeya Jimicsiga wuxuu u leeyahay faaiido balaadhan malabka cun wax yar oo aan badneyn ka hor jimicsiga xitaa marka aad ciyaar adag leedahay horay u sii cun.
Cuncunka Dhuunta Waa U Dawo: Xabeebta wuu u fiican yahay malabka , hadii aad leedahay dhuun cun cun ama riiraxyo waa mid aad ugu wanaagsan malabka wuuna daaweeyaa hadii aad joogteyso, tijaabo la sameeyay ayaa lagu guuleystay malabka oo waxyaabo sahlan lagu daray Tusaale : dhowr qaaddo ( Malqacad ) oo malab ah cun ama ku qas inyar oo milix leh ayodhiin iyo xabbad liimo dhanaan ah dabadeed cun wey ku dareemeysaa in uu kaa joogsaday cuncunkii dhuunta.
Wuxuu Dhisaa Difaaca Jidhka: Malabka wuxuu awood weyn u yeelaa unugyada difaaca jidhka ,qaastan hadii aad ka shaqeysid meelo jeermis badan sida jeermiska ka yimaada dadka meelaha ay yaalaan,isku day in aad joogteyso shaah lagu daray malab iyo liin maalin walba. Xusuusnow hadii aad caruur leedahay ka ilaali cunuga ka yar hal sano in aad siiso malab, waayo dheefshiidkiisa ayaa qatar geli kara xanuunana waa laga qaadi karaa
Miisaanka Wuu Dhimaa: Ma ogtahay in malabka uu malabka ka qeyb qaato dhimista miizaanka jidhka , tusaale hadii aad biyo diiran oo lagu daray liimo dhanaan aad cabtid aroor kasta waxey yareysaa baruurta. Laakiin ha hilmaamin in aad malab ku sarsato.
Hurdada Wuu Ka Qeyb Qaataa: Hadii aad dhibaato ku qabto jiifsashada habeenkii xiliga hurdada malabka wuu kaa caawin karaa , raac tilmaantan in yar oo malab ah ku shub koob dabadeed ku dar caano diiran kadibna cab. Malabka wuxuu qofka ku keenaa degenaan iyo raaxo habeenkii xiliga hurdada.
Dhaawaca Waa Lagu Daweeyaa: Hadii aad dhaawac ka qabto meel ka mid ah jidhkaad oo uu dhaqso kuu dawoobi waayay fadlan tijaabi in aad faashad ku shubto in yar oo malab ah kadibna aad ku dhaydo meesha iyo hareeraha kadib kula dheji faashada. waa jeermis dile malabka.xanuunkiina wuu kaa yaraanayaa waa tijaabo la sameeyay laguna guuleystay.
Neefta Urta Ee Afka Waa Lagula Dagaalamaa: Ma ogtahay in malabka kaa caawin karo in aad la dagaalantid suggida cuntada, malabka waxaa ku jirta sonkor dabiici ah oo aan waxba u dhibeyn beerka,runta waxey tahay malabka in uu la dagaalamo neefta Urta ee afka ka soo baxda taasi micnaheedu ma’aha in aad joojiso cadayga maalin walba waa waajib taasi .hadii aad leedahay neeftaa urta ee loo yaqaan karoonikada, waxaad isku dartaa in yar malab ah iyo qarfaha shaaha si aad ula dagaalanto neeftaa xun. Waxaa kaloo jira tira badan oo faa’iido ah ee uu leeyahay malabka kuwana waa qeyb yar oo ka mid ah marka ulajeedada maaha in aad wax badan ka qaadato malabka waayo sun ayuu kugu noqon karaa hadii aad xadi badan isticmaasho.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/malab.jpg 168 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-14 20:37:382018-08-14 20:37:38Wax Ba Baro 7 Faa’iido Oo ILAAHAY SWT Ku Mannaystay Malabka Iyo Muhiimaddiisa Caafimaad.
Daawo Madaxweynaha ku meel gaadhka ah ee Maamulkii guracnaa ee Cabdi Iley oo... Nin Somali ah oo qirtay dilkii loogu gaystay Diridhaba qoyska reer Djibouti...